Daawo xulka Holland oo guul wayn ka gaaray Luxembourg oo ay marti u ahaayeen xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Memphis Depay - Gool FM	twitter
Daawo xulka Holland oo guul wayn ka gaaray Luxembourg oo ay marti u ahaayeen xilli labo jeer uu shabaqa soo taabtay Memphis Depay
(Luxembourg) 14 Nof 2016 – Xulka Netherlands ayaa xalay 3-1 uga adkaaday dhiggooda Luxembourg oo ay booqdeen kulan ka tirsan isreeb-reebka Koobka Adduunka 2018, iyadoo uu guushaas ku hoggaamiyey Memphis Depay.
Xulka Netherlands ayaa goolka la horreeyey waxaana u dhaliyey 36’daqiiqo Arjen Robben, laakiin Luxembourg ayaa la yimid goolka barbaraha waxaana rigoore ugu dhaliyey Maxime Chanot, kulanka ayaana lagu kala nastay gar isku mid ah 1-1.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay wiilka aan booska joogtada ah ka haysan Man United ee Memphis Depay ayaa labo gool u dhaliyey xulkiisa Holland waxaana ay sidaasi 3-1 guul ah kaga gaareen dhiggooda Luxembourg.
Waa markii ugu horreyey xirfaddiisa oo uu Memphis Depay kulan gudihiis labo gool u dhaliyo xulkiisa Holland.
Guushan uu gaaray xulka Holland ayaa ka dhigan inaan xulkan Orange looga soo adkaan garoonkale isreeb-reebka koobka Adduunka tan iyo sanadkii 2001.
DAAWO GOOLASHA KULANKAN:-